राशिफल Archives - Halesi News
शुभ बिहानी !! पाथीभरा माताले सबैको मनोकामना पूरा गरुन् हेर्नुस् आजको राशि फल
मेष विघ्न बाधामा परिनेछ । फाइदा अरुले लिनेछन्। वृष प्रेममा प्रगति हुनेछ । पारिवारिक भेटघाट बढ्नेछ। मिथुन नयाँ काममा रुचि जानेछ । घरबाहिरको काम बढ्नेछ। कर्कट अध्ययनले साथ दिनेछ । आम्दानीमा प्रगति हुनेछ। सिंह मित्रतामा खटपट हुनेछ । पारिवारिक द्वन्द बढ्नेछ। कन्य साथीभाइले सहायता दिनेछन् । नयाँ ठाउँको भ्रमण हुनेछ । तुला भोजभतेरमा खर्च हुनेछ । बोली वचनले सहायता पाइनेछ । वृश्चिक जिम्मेवारी थपिनेछ । पारिवारिक सन्तुष्टि मिल्नेछ। धनु अनावश्यक विवाद बढ्नेछ । काममा घाटा मिल्नेछ। मकर आम्दानी राम्रो हुनेछ । सवारी सुख मिल्नेछ। कुम्भ राजनीतिमा फाइदा हुनेछ । कर्मको प्रशंसा मिल्नेछ। मीन यात्राको योग बन्नेछ । वैदेशिक सहायता मिल्नेछ । Posted on August 20, 2019
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कामहरू समयमा नबन्नाले मानसिक तनाव बढ्नेछ । रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला भविष्यमा विवाद सिर्जना हुन सक्छ । अध्ययनमा मन नजाने तथा प्रेममा फाटो आउने अधिक सम्भावना रहेको छ । असजिलो तथा अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा दैनिक कामकाज गर्न गाह्रो हुनेछ । वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) नोकरी तथा जागिरमा आफ्नै कमजोरीले समस्या आउनेछ । कार्यक्षेत्रमा काम बिग्रने हुँदा आलोचना गर्नेहरू सक्रिय हुनेछन् । व्यापार व्यवसाय खस्केर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था बिग्रनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा इज्जत प्रतिष्ठामा कमी हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिस सँग विवाद हुनेछ भने सरकारी सेवामा रहेर काम गर्नेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)बौद्धिकताको प्र
आज बैशाख १८ गते बुधबारका दिन केदार नाथको दर्शन गर्नुहोस् तपाईंको मनोकामना पूरा हुनेछ
आज बैशाख १८ गते बुधबारका दिन केदार नाथको दर्शन गर्नुहोस् तपाईंको मनोकामना पूरा हुनेछ मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापारमा लगानी बढाउने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपनि समय मध्यमय रहेकोले ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशबाट आयातित सामानको व्यापार फस्टाउनेछ भने स्वदेशमा उत्पादित सामानहरूले बजार पाउने सम्भावना कम रहेको छ । खोज तथा अनुसन्धानमा लाग्ने विद्यार्थीहरूका लागि समयले भनेजस्तो नतिजा ल्याउने सम्भावना कम रहेको छ । पहिलिनै फिक्स भएको प्र्रीय पात्र सँगको भेट नहुने हुँदा मन खिन्न हुनेछ । वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग रहेको छ । सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरू लाभ हुनेछ । पढाई लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरू भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । ईच्चा आकाङ
आज बुधबार का दिन श्री बुढा सुब्बा मन्दिरलाई ॐ लेखेर दर्शन गर्नुहोस् तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ आजको राशिफल : वैशाख १८ गते, बुधबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापारमा लगानी बढाउने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपनि समय मध्यमय रहेकोले ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशबाट आयातित सामानको व्यापार फस्टाउनेछ भने स्वदेशमा उत्पादित सामानहरूले बजार पाउने सम्भावना कम रहेको छ । खोज तथा अनुसन्धानमा लाग्ने विद्यार्थीहरूका लागि समयले भनेजस्तो नतिजा ल्याउने सम्भावना कम रहेको छ । पहिलिनै फिक्स भएको प्र्रीय पात्र सँगको भेट नहुने हुँदा मन खिन्न हुनेछ । वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग रहेको छ । सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरू लाभ हुनेछ । पढाई लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरू भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । ईच्चा आकाङ्क्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरू बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवस
मुक्तिनाथले बाबाले सबैको कल्याण गरुन् आजको राशी फल वैशाख १७ गते, मङ्गलबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् भने श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला। शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिनेछ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर मिल्नेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तकाहरुले सहयोग गर्नेछन् भने सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । भविष्यका लागि काम गर्न सकिने समय रहेको छ । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) पुराना समस्याहरू समाधान गरी आम्दानीका स्रोत हरू बढाउन सकिनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् भने आफ्नो क्षेत्रमा वर्चस्व कायम राख्न सकिने तथा पहुँच बिस्तार गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईँको काममा सहयोग हुनेछ । परिवार तथा आफन्तको साथ पाइने हुनाले काम गर्न सहयोग पुग्नेछ । नोकरी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई चिर्दै गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) आकस्मि
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १६ गते सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मेष मेषः– घर परिवारबाट सहयोग पाईनेछ । घरमा जमघट बढ्नेछ । भौतिक सम्पति बढ्नेछ । आम्दानीका नयाँ क्षेत्र फेला पर्ने छन् । उद्योग पराक्रम बढ्नेछ । व्यापार बढ्नेछ । शुभ कार्यारम्भ हुनेछ । बृष वृषः– काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । घर बाहिर बसेर गरेका काम बढि उपलब्धिमूलक रहने छन् । अधुरा काम बन्ने छन् । अरुको भर नपर्नु होला । मिथुन मिथुनः– अस्थिरताले अनिष्ट निम्त्याउनेछ संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला । आफ्ना कामले गति लिने छैन । विना उपलब्धिका काम बढि हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा तनाव हुन सक्छ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । कर्कट कर्कटः– शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न असक्षम हुनुहुनेछ । काम गर्ने वातावरण पनि मिल्ने छैन । अनावस्यक काममा समय र धन खर्च हुनेछ । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ सतर्क रहनु होला । सिंह सिंहः– वैदेशिक कार्य योज
बुढा सुब्बा भगवानले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १५ गते आइतबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मेष मेषः– दिन अनुकुल देखिन्छ । गरेका काम बन्नेछन । व्यापार व्यवसायमा शुभ संकेत देखिने छन् । आयको दृष्टिले मध्यान्ह पछिको समय बढि अनुकल देखिन्छ । अवसरको खोजी हुनेछ । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । बृष वृषः– पूर्वान्ह समय ठीकै ठीकै देखिन्छ । ढिलो गरि काम सम्पन्न हुनेछन् । अपरान्हबाट समयले बढि साथ दिनेछ । गरेका काममा बढि सफलता मिल्नेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । मिथुन मिथुनः– गरेका अधिकाँश काममा असफलता मिल्नेछ । आफ्ना आन्तरिक कुरा नखोल्नु होला र अरुबाट सहयोगको अपेक्षा नराख्नु होला उल्टो सहयोग गर्ने छन् । व्यापार घट्न सक्छ । आयको तुलनामा खर्च बढि हुने देखिन्छ । कर्कट कर्कटः– काममा विलम्व नगर्नु होला समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ । विशेष गरेर मध्यान्ह पछिको समय प्रतिकुल बन्नेछ । अन्तिम चरणमा पुगेका काम पनि स्थगित हुनेछन्
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १४ गते शनिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मेष मेषः– समयले साथ दिनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । नयाँ कामको अवसर आउन सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । बृष वृषः– समयले विस्तारै साथ दिनेछ । भाग्यमा भन्दा कर्ममा जोड दिनु होला । बाह्य काममा समय बढि खर्च हुनेछ । गरेका धेरै जसो क्रमिक रुपमा सफल हुनेछन् । गुमेको आस्था र विश्वास थोरै पलाउने छ । मिथुन मिथुनः– सोचे जस्तो,गरेर गरे जस्तो कहि कतै हुने देखिन्न । शारीरिक एवं मानसिक दूर्वलता बढ्नेछ । विभिन्न खालका समस्या सँग भिड्नु पर्नेछ । दैनिक काम काजमा अवरोध आउने देखिन्छ । आस्था घट्नेछ । कर्कट कर्कटः–विचारमा परिवर्तन आउनेछ । समयमा कार्य सम्पादन गर्नु होला नत्र पछि रोकिने छन्,विभिन्न समस्या आउने छन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । आफन्तको सहयोग थोरै मिल्नेछ । सिंह सिंहः– पछाडि आफ्नै म
मेष मेषः– समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । मानसिक तनावमा कमि आउनेछ । कीर्ति क्षय हुनसक्छ सजग रहनु होला । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने छैन । घरका समस्या कम भएर जानेछन् । बृष वृषः– दिन त्यति अनुकुल देखिदैन । काममा विभिन्न समस्या आउने देखिन्छ । विशेष गरेर स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा खासै सुधार आउने देखिन्न । इच्छाशक्ति बढेर आउने छ । मिथुन मिथुनः– आफन्तजनको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम बन्ने छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नेछ । नोकरीमा राम्रै देखिन्छ । मान सम्मान मिल्नेछ । समयमा कार्य सम्पादन गर्नु होला नत्र अवसर फुत्किनेछ । कर्कट कर्कटः– आफन्तले धोका दिन सक्छन् सजग रहनु होला । आर्थिक कारोवारमा चनाखो रहनु होला । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । सिंह सिंहः– मानसिक तनाव
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १२ गते विहिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”